Ngaphandle kokuKhangelwa kweFowuni, iGalelo lakho lePhulo likhula ngakumbi ngokungachanekanga | Martech Zone
Ngaphandle kokuKhangelwa kweMnxeba, iGalelo lakho lePhulo likhula ngokungachanekanga ngakumbi
NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Sinomthengi weshishini onamasebe aliqela kwezentengiso… ubudlelwane boluntu, imithombo yeendaba zemveli, ukwenziwa kweinjini yokukhangela, ukuthengisa okuhambayo, ukukhula komxholo nokunye. Kunyaka ophelileyo, siyazi ukuba ukugcwala kunye nokuguqulwa kwe-SEO kunye nomxholo kuphindwe kabini kuba kubahlalutyi idityaniswe ngokufanelekileyo kuyo yonke indawo.
Kukho ingxaki enkulu, nangona. Isebe labo lentengiso lisebenzisa inombolo yefowuni efanayo kuwo onke amaphulo ngaphandle kokuphakathi. Isiphumo kukuba nabani na ofowunela inkampani unxulunyaniswa nokusilela kwimithombo yeendaba zemveli. Ngelixa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba imithombo yeendaba ngokwesiko iqhuba iminxeba, umxhasi uyayicekisa impembelelo yakhe kwaye uyithathe kancinci impembelelo yemithombo yeendaba yedijithali kuba engenayo ukulandelela umnxeba.
Yintoni ukulandelela umnxeba?
Uninzi lwamashishini aphakathi ukuya kubukhulu obukhulu aneesistim zeefowuni ezivumela ukuba iifowuni ezininzi zigqithiselwe ngengqondo ngaphakathi kwinkampani. Iiplatifti zikhona ngoku apho unokulandela ngokuchanekileyo umthombo wephulo lomnxeba ngokutshintsha inombolo yefowuni kwiphulo ngalinye. Inxalenye yeposi ethe ngqo inokuba nenombolo enye yefowuni, iwebhusayithi enye inombolo yefowuni, intengiso kamabonakude enye inombolo yefowuni.
Iinkonzo zikhona ezivumela iinkampani ukuba zongeze iinombolo zeefowuni ezithile kumaphulo kwaye bazisebenzise ukulandelela ngokuchanekileyo iifowuni. Ezi ziqonga ziguqukile kwaye zinokubonelela ngokuchaneka ngakumbi-ngokutshintsha ngamandla inombolo yefowuni kwindawo yakho esekwe kumthombo wokudlulisela ukuze ukwazi ukulandelela ukukhangela, ezentlalo, i-imeyile kunye namanye amaphulo ngokuchanekileyo. Le nkonzo ibizwa ukulandelela umnxeba (Kaninzi: Inkcazo yevidiyo yokulandelela umnxeba).
Kutheni usebenzisa ukuKhangela umnxeba?
kunye ngaphezulu kwe-2 yezigidigidi zeefowuni Ukusetyenziswa kwihlabathi liphela, uhambo lwabathengi luya lusiba nzima ngakumbi, nabantu batshintsha phakathi kweselfowuni, idesktop, ukucofa kunye neefowuni. Itekhnoloji iyaqhubeka nokudibanisa iwebhu kunye neselfowuni, nayo. Izixhobo ezininzi zichonga iinombolo zefowuni ngokuzenzekelayo kwizicelo nakwizikhangeli kwaye unokucofa nje ngokutsalela umnxeba kubo. Kwaye unako Uxhumano inombolo yefowuni ngaphakathi komxholo wesiza. I-iPhone ikhuphe ukusebenza okwandisa i-smartphone yakho kwi-desktop yakho ngaphandle komthungo ukuze usebenzise ikhompyuter yakho ukwenza iifowuni.
The Isitishi sefowuni engenayo ikhula ngokukhawuleza, kodwa abathengisi abanawo umfanekiso ocacileyo ngawaphi amaphulo aqhuba eyona mikhondo iphambili. Ukungabinayo idatha yokuqhagamshela unxibelelwano kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi, ezinje ngeefowuni, kunokuxabisa iinkampani ezizigidi ngamathuba okufumana imali Le infographic evela Ingeniso ibonelela ngemvelaphi yokuba kutheni abathengisi kufuneka bacinge ngedatha yabo yentengiso ngokweefowuni zombini KUNYE nokucofa.
An i-ebook ehamba nayo ibonelela ngengcebiso ezisebenzayo malunga nendlela abathengisi abanokongeza ngayo ubukrelekrele bokufowuna kwizixhobo zabo, ukuphucula iifowuni njengokucofa ukuqhuba ngakumbi kwizikhokelo eziphezulu.
Kwilizwe elihambileyo, u-Invoca ubonelela ngobukrelekrele bokutsalela kwilifu lokuthengisa ukunceda abathengisi baqhube iifowuni ezingenayo kwaye baziguqulele kwintengiso. Iqonga le-Invoca lihambisa ubukrelekrele beminxeba obungenayo obufunekayo kubathengisi ukuze babambe kwaye baphucule ukuzibandakanya kwabathengi kunye nentengiso ngaphaya konqakrazo. Ukusuka kwigalelo lokuya kwiinjongo, abathengisi bafumana ukuqonda okupheleleyo kohambo lwabathengi ngaphesheya kwedijithali, iselfowuni kunye neendawo zokucofa ngaphandle kweintanethi ukuze bakwazi ukwenza inkcitho kwintengiso, ukuqhuba iifowuni ezisemgangathweni kunye nokuhambisa amava abathengi angcono.
tags: imbekoukulandelela umnxebakwi-infographicUkuhlaselainombolo yomnxebaumkhondo wefowuni
Amanyathelo ama-5 aSisiseko okuQala ukwakha uLuhlu lwakho lwe-imeyile
IBlackBox: Ulawulo lomngcipheko kwii-ESPs zokulwa nokuGqwesana
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2014 ngo-4: 59 AM
Inqaku elihle! Ndivumelana ngokupheleleyo nawe ukuba ukulandelela umnxeba kunempembelelo enkulu kwaye kunceda amashishini avavanye iphulo ngalinye lokuthengisa ngexesha elifanelekileyo kwaye avumele ukuba benze izigqibo ezikhawulezileyo nezaneleyo kunye nohlengahlengiso ekwandiseni i-ROI.
Enkosi ngenqaku elihle!
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2014 ngo-6: 10 PM
Uyabheja! Waxabise amagama anomusa.